“Qof walba ayaad niyad-jabiseen” – Gilberto Silva oo weerar ku qaaday Arsenal – Gool FM
“Qof walba ayaad niyad-jabiseen” – Gilberto Silva oo weerar ku qaaday Arsenal
Dajiye June 8, 2022
(London) 08 Juun 2022. Halyeeyga kooxda Arsenal ee Gilberto Silva ayaa dhaleeceeyay kooxda haatan ee uu hogaamiyo tababare Mikel Arteta, kaddib natiijooyinkii niyad jabka ahaa ee ay kaga dhameysteen xilli ciyaareedkii dhawaan la soo xiray.
Arsenal ayaa ku guuldareysatay inay u soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka soo socda, kaddib markii ay lumisay kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Sida uu daabacay wargeyska Daily Mail ee dalka England, Gilberto Silva wuxuu ku dhaleeceeyay kooxda haatan ee uu hoggaamiyo tababare Mikel Arteta, wuxuuna yiri:
“Ma ogtahay waxa niyad jab ku ahaa dhammaan taageerayaasha Arsenal? aniga ahaan waxaan u maleynayaa inay tahay fursadii ay lumiyeen ee ahayd u soo bixitaanka Champions League.”
“Arsenal waxa ay u baahantahay inay ku soo laabato hoggaanka horyaalka sababtoo ah aad ayay u adagtahay in la arko Gunners oo xilli ciyaareedyadii la soo dhaafay ka fog ka ciyaarista Champions League, sidoo kale kana fog u tartamista koobab.”
“Waan ogahay in marka la barbardhigo Manchester City iyo Liverpool aysan isku heer ahayn, Arsenal waa inay si adag oo wanaagsan u shaqeysaa si ay ugu soo laabato waayihii wacnaa, isla markaana ay biloowdaa u dagaalamida koobab.”
“Waxaan joognaa mid ka mid ah kooxaha ugu fiican adduunka, mana ahan wax la aqbali karo inaan sameyno waxa aan sameyneyno,”
“Waxaa la joogaa waqtigii aan sameyn lahayn waxa saxda ah oo aan ku dhaqmi lahayn maskax sax ah sida waafaqsan shuruudaha kooxda. “
Man United oo soo gashay loolanka loogu jiro saxiixa Alessandro Bastoni
Chelsea oo bar-tilmaameedsanaysa saxiixa daafac si weyn ay u doonayaan dhammaan kooxaha Yurub